Motivation for success :: राजा फर्किने हल्ला चलेका बेला युवराज दीपेन्द्रको प्रेम कहानी बाहिरियो, के छ दिपेन्द्रको प्रेम र ज्ञानेन्द्रको राजगद्दीको सम्बन्ध ?
राजा फर्किने हल्ला चलेका बेला युवराज दीपेन्द्रको प्रेम कहानी बाहिरियो, के छ दिपेन्द्रको प्रेम र ज्ञानेन्द्रको राजगद्दीको सम्बन्ध ?
काठमाडौँ – युवराज दीपेन्द्र बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित इटन कलेजमा पढ्दा उनका सहपाठी थिए चार्ल्स नामक बेलायती किशोर । चार्ल्सका बाबु त्यस बेला बेलायती संसद्का लर्ड थिए । र, चार्ल्सकी बहिनी थिइन्– शेली । युवराज दीपेन्द्रको बेलायत अध्ययन क्रममा ‘लोकल गार्जियन’ थिए, शेलीका बाबु लर्ड । युवराज दीपेन्द्र २०४४ देखि २०४८ सम्म लन्डन बसेका थिए ।